SBS Language | COVID-19 update: Xayiraaddii Melbourne oo Toddobaad kale lagu daray
COVID-19 update: Xayiraaddii Melbourne oo Toddobaad kale lagu daray
Waa wargelintaadii ugu cusbayd ee Coronvirus-ta Australia ee 11 August 2021
Dubbo, New South Wales oo xayiraade lagu soo rogey
Shan keys oo cusub oo Victoria laga baadhayo meeshay ka yimaaddeen
Cairns oo oo xayiraaddii laga dul qaaday
20 keys oo cusub ayaa laga helay Victoria oo COVID-19 ah, oo 5 ka mid ahi aanay la xidiidhsanayn ilaha la xaqiijiey, halka 6 ka mid ahi, ay bulshada ku dhix jireen iyagoo COVID-19ka qaba.
Primierka Victoria, Daniel Andrews ayaa sheegay xayiraadda la kordhin doono illaa ugu soo horreyn khamiista bishu tahay 19ka.
Halkan ka raado taxanaha goobaha tallaalka
New South Wales waxaa laga helay 344 keys oo cusub oo COVID-19 ah oo 65 ka mid ahi kuu dhex jireen bulshada iyaga oo qaba COVID-19ka. 2 qof oo aan tallaalka qaadanin ayaa COVID-9ka awgii u dhintay, kuwaasoo kala aha nin sagaashameeyo jir ah, in nin soddomeeyo jira ah oo qabey arrimo caafimaad oo kale.
Dadweynaha dowlad deegaanka Dubbo ee dhinaca New South Wales, ayaa geli doona xayiraad hal toddobaad ah, laga bilaabo 1da duhurnimo ee maanta, ka dib markii 2 keys oo cusub laga diiwaan geliyey deegaankaas.
Sarkaaladda caafimaaka ee New South Wales, Dr Kerry Chant, in ay 62ka qof eeku jira gargaarka degdegga ah (intensive care), aanay 57 ka mid ahi is tallaalin, iyadoo 5 ka mid ahi qaateen duritaankii koowaad oo keliya.
Halkan ka raadi taxanaha goobaha tallaalka.
Queensland waxaa laga diiwan geliyey 4 keys oo cusub oo COVID-19 ah, kuwaasoo lala xidhiidhiyey dib-u-qaraxyadii awelba jirey, isla markaana karantiil ku jirey muddadii ay COVID-19ka qabeen oo dhan.
Xayiraaddi 3da maalmood ahayd ee lagu soo rogay Cairns iyo Yarrabah, ayaa dhammaan doonta maanta 4-ta galabnimo iyadoo xannibaadaha qaarkood sii socon doonaan.
Sarkaaladda caafimaadka Dr Jeannette Young, yaa ku adkaysay carruurta da'doodu u dhexayso 12-15 sannandood, ee qaba xannuunno kale, inay isu diiwaan geliyaan tallaalka.
Halkan guji si aad u samaysato ballaan.